ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်ချိန်မှာ အဖိုးတန်အစားအစာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပေါက်ပေါက်ရဲ့အကြောင်း
4 May 2018 . 4:42 PM
အနံ့ကိုက မွှေးအီနေပြီး အနံ့ရရုံနဲ့ အရသာဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာ ကြိုသိနိုင်တဲ့သွားရေစာမျိုးကို စားဖူးကြလားမသိဘူး။ ဘယ်လိုသွားရေစာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ သေချာတာပေါ့၊ ပြောင်းဖူးစေ့ကို အပူပေးပြီး ပြောင်းဖူးအသားလေးတွေကို ပွပွရွရွလေးဖြစ်အောင် ဖောက်ထားတဲ့ ပေါက်ပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ပေါက်ကိုမကြိုက်ရင်သာနေမယ်၊ မစားဖူးတဲ့သူတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အပျင်းပြေစားကြသလို အစေးကျအောင်ကျိုထားတဲ့ သကြားနဲ့ ထောပတ်ရောပြီး ပြောင်းဖူးကို ဖောက်ထားတဲ့အတွက် အရသာက ချိုချိုအီအီလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ကလေးတွေ အထူးနှစ်ခြိုက်တဲ့ သွားရေစာတစ်မျိုးပေါ့။
အခုတော့ ဒီပေါက်ပေါက်ဆိုတဲ့ သွားရေစာဟာ ဘယ်အချိန်ကစပြီးပေါ်လာတာလဲ၊ ဘယ်သူကစပြီး တီထွင်လိုက်တာလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းကိုသိထားတော့ စားတဲ့အခါ အလကားအပျင်းပြေမဟုတ်တော့ဘဲ ဒီလိုသွားရေစာကို ဒီလိုအရသာခံစားရတယ်ဆိုတာမျိုး သိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီပေါက်ပေါက်ဆိုတဲ့ သွားရေစာဟာ သက္ကရာဇ် ၁၈၀၀ ခုနှစ်ရဲ့ အလယ်လောက်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တကယ်တော့ ပေါက်ပေါက်က ရုပ်ရှင်ရုံရောက်ရင် စားရတဲ့ ရိုးရာအစားအစာတစ်ခုလို ဖြစ်နေပေမယ့် မူရင်းပေါက်ပေါက်စားတဲ့အလေ့အထဟာ ဘရင်ဂျီလူမျိုးတွေရဲ့ ညဦးပိုင်းနောက်ကျမှစားတဲ့ သွားရေစာ၊ ဆုတောင်းပွဲတွေမှာ တည်ခင်းတဲ့မုန့်အဖြစ် စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၈၅ ခုနှစ်လောက်မှာ သစ်သီးဆံ၊ သစ်သီးစေ့တွေကို ရေနွေးငွေ့နဲ့လှော်တာမျိုးနဲ့စတင်ခဲ့ပြီး ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာတော့ အမေရိကန်ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Charles Cretors ဆိုသူက ပေါက်ပေါက်ဖောက်တဲ့စက်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ချီကာဂိုမြို့မှာ စပြီးတည်ဆောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာကနေ ပေါက်ပေါက်ဆိုတဲ့ သွားရေစာဟာ လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ပေါက်ပေါက်စရောက်လာခဲ့ပုံကတော့ ရုံပိုင်ရှင်တွေက ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ အသံဆူဆူညံညံဖြစ်စေမယ့် သွားရေစာတွေကို မယူလာစေချင်ကြသလို ပေါက်ပေါက်ကလည်း ဈေးလည်းသက်သာပြီး အသံလည်းမဆူညံတဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ တခြားမုန့်တွေထက် ပေါက်ပေါက်ကိုသာ စားဖြစ်အောင် Target ထားရောင်းချရင်းကနေ ပေါက်ပေါက်ဟာ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ စားရမယ့်သွားရေစာတစ်ခုလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးဆိုက်ခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ ခုနှစ်လောက်မှာ ပေါက်ပေါက်ဟာ နာမည်ကြီး သွားရေစာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အမေရိကန်က သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွက် နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကို အသဲအသန်ထူထောင်နေရတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လူတွေဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးရဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ်တွေကို မေ့လျော့ဖို့ ဈေးပေါတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ဖျော်ဖြေရေးနေရာတွေကိုသွားပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ယခင်တုန်းက ရုပ်ရှင်ရုံတွေက ပေါက်ပေါက်လုပ်တဲ့စက်တွေဟာ အပြင်လမ်းပေါ်မှာ ပေါက်ပေါက်ရောင်းတဲ့သူတွေလောက် သိပ်ပြီးနာမည်မကြီးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရုံပိုင်ရှင်တွေက ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အပြင်မှာ ပေါက်ပေါက်ရောင်းတာတွေကို ခွင့်မပြုတော့ဘဲ ရုပ်ရှင်ရုံကပေါက်ပေါက်ရဲ့ ရောင်းအားကို မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်တန်ဖိုးကို လျှော့ချပြီး ရုပ်ရှင်ရုံထဲ လူရောက်အောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပေါက်ပေါက်ရဲ့ရောင်းအားကို မြှင့်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ပေါက်ပေါက်ဟာ ရုပ်ရှင်ရုံကပေါက်ပေါက်၊ အပြင်ကပေါက်ပေါက်ရယ်မဟုတ်တော့ဘဲ နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရပြီး လူတိုင်းစားနိုင်တဲ့ သွားရေစာဖြစ်နေပါပြီ။
ကမ်ဘာ့စီးပှားပကျြကပျဆိုကျခြိနျမှာ အဖိုးတနျအစားအစာဖွဈခဲ့တဲ့ ပေါကျပေါကျရဲ့အကွောငျး
အနံ့ကိုက မှေးအီနပွေီး အနံ့ရရုံနဲ့ အရသာဘယျလိုရှိမယျဆိုတာ ကွိုသိနိုငျတဲ့သှားရစောမြိုးကို စားဖူးကွလားမသိဘူး။ ဘယျလိုသှားရစောမြိုးဖွဈမယျထငျလဲ။ သခြောတာပေါ့၊ ပွောငျးဖူးစကေို့ အပူပေးပွီး ပွောငျးဖူးအသားလေးတှကေို ပှပှရှရှလေးဖွဈအောငျ ဖောကျထားတဲ့ ပေါကျပေါကျပဲဖွဈပါတယျ။ ပေါကျပေါကျကိုမကွိုကျရငျသာနမေယျ၊ မစားဖူးတဲ့သူတော့ မရှိသလောကျပါပဲ။ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျး အပငျြးပွစေားကွသလို အစေးကအြောငျကြိုထားတဲ့ သကွားနဲ့ ထောပတျရောပွီး ပွောငျးဖူးကို ဖောကျထားတဲ့အတှကျ အရသာက ခြိုခြိုအီအီလေးဖွဈနပေါတယျ။ ကလေးတှေ အထူးနှဈခွိုကျတဲ့ သှားရစောတဈမြိုးပေါ့။
အခုတော့ ဒီပေါကျပေါကျဆိုတဲ့ သှားရစောဟာ ဘယျအခြိနျကစပွီးပျေါလာတာလဲ၊ ဘယျသူကစပွီး တီထှငျလိုကျတာလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ သမိုငျးကွောငျးကိုသိထားတော့ စားတဲ့အခါ အလကားအပငျြးပွမေဟုတျတော့ဘဲ ဒီလိုသှားရစောကို ဒီလိုအရသာခံစားရတယျဆိုတာမြိုး သိသှားမယျလို့ထငျပါတယျ။
ဒီပေါကျပေါကျဆိုတဲ့ သှားရစောဟာ သက်ကရာဇျ ၁၈၀၀ ခုနှဈရဲ့ အလယျလောကျမှာစတငျပျေါပေါကျလာခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ တကယျတော့ ပေါကျပေါကျက ရုပျရှငျရုံရောကျရငျ စားရတဲ့ ရိုးရာအစားအစာတဈခုလို ဖွဈနပေမေယျ့ မူရငျးပေါကျပေါကျစားတဲ့အလအေ့ထဟာ ဘရငျဂြီလူမြိုးတှရေဲ့ ညဦးပိုငျးနောကျကမြှစားတဲ့ သှားရစော၊ ဆုတောငျးပှဲတှမှော တညျခငျးတဲ့မုနျ့အဖွဈ စတငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၁၈၈၅ ခုနှဈလောကျမှာ သဈသီးဆံ၊ သဈသီးစတှေ့ကေို ရနှေေးငှနေဲ့လှျောတာမြိုးနဲ့စတငျခဲ့ပွီး ၁၈၉၀ ပွညျ့နှဈလောကျမှာတော့ အမရေိကနျကုနျသညျတဈဦးဖွဈတဲ့ Charles Cretors ဆိုသူက ပေါကျပေါကျဖောကျတဲ့စကျကို အမရေိကနျနိုငျငံ၊ ခြီကာဂိုမွို့မှာ စပွီးတညျဆောကျပွီး စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုအနနေဲ့ လုပျကိုငျခဲ့ရာကနေ ပေါကျပေါကျဆိုတဲ့ သှားရစောဟာ လူသိမြားလာခဲ့ပါတယျ။ ရုပျရှငျရုံတှကေို ပေါကျပေါကျစရောကျလာခဲ့ပုံကတော့ ရုံပိုငျရှငျတှကေ ရုပျရှငျရုံထဲမှာ အသံဆူဆူညံညံဖွဈစမေယျ့ သှားရစောတှကေို မယူလာစခေငျြကွသလို ပေါကျပေါကျကလညျး ဈေးလညျးသကျသာပွီး အသံလညျးမဆူညံတဲ့အတှကျ ရုပျရှငျရုံမှာ တခွားမုနျ့တှထေကျ ပေါကျပေါကျကိုသာ စားဖွဈအောငျ Target ထားရောငျးခရြငျးကနေ ပေါကျပေါကျဟာ ရုပျရှငျရုံမှာ စားရမယျ့သှားရစောတဈခုလို ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကမ်ဘာ့စီးပှားပကျြကပျကွီးဆိုကျခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ ခုနှဈလောကျမှာ ပေါကျပေါကျဟာ နာမညျကွီး သှားရစောတဈခုဖွဈလာပါတယျ။အမရေိကနျက သူ့နိုငျငံသားတှရေဲ့ဆငျးရဲနှမျးပါးမှုအတှကျ နိုငျငံရဲ့စီးပှားရေးကဏ်ဍကို အသဲအသနျထူထောငျနရေတဲ့အခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ လူတှဟော ကမ်ဘာ့စီးပှားပကျြကပျကွီးရဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏျတှကေို မလြေ့ော့ဖို့ ဈေးပေါတဲ့ရုပျရှငျနဲ့ ဖြျောဖွရေေးနရောတှကေိုသှားပွီး ကွမျးတမျးတဲ့အခြိနျတှကေို ဖွတျသနျးခဲ့ကွပါတယျ။
ယခငျတုနျးက ရုပျရှငျရုံတှကေ ပေါကျပေါကျလုပျတဲ့စကျတှဟော အပွငျလမျးပျေါမှာ ပေါကျပေါကျရောငျးတဲ့သူတှလေောကျ သိပျပွီးနာမညျမကွီးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ နောကျပိုငျးမှာ ရုံပိုငျရှငျတှကေ ရုပျရှငျရုံရဲ့အပွငျမှာ ပေါကျပေါကျရောငျးတာတှကေို ခှငျ့မပွုတော့ဘဲ ရုပျရှငျရုံကပေါကျပေါကျရဲ့ ရောငျးအားကို မွှငျ့တငျခဲ့ပါတယျ။ ရုပျရှငျရုံလကျမှတျတနျဖိုးကို လြှော့ခပြွီး ရုပျရှငျရုံထဲ လူရောကျအောငျလုပျခွငျးအားဖွငျ့ ပေါကျပေါကျရဲ့ရောငျးအားကို မွှငျ့တငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ ပေါကျပေါကျဟာ ရုပျရှငျရုံကပေါကျပေါကျ၊ အပွငျကပေါကျပေါကျရယျမဟုတျတော့ဘဲ နရောတိုငျးမှာ အလှယျတကူဝယျလို့ရပွီး လူတိုငျးစားနိုငျတဲ့ သှားရစောဖွဈနပေါပွီ။
by Moethae Say . 46 mins ago